Android Archives - Barataa Technologies - Giddu Gala barnootaa fi Odeeffannoo
Tartiiba “Google Developer Account” ittiin banachuu dandeessan
By Alifu Haji	Android, Technology July 15, 2019
Maxxansa kana keessatti akkaataa yookiin tartiiba “google developer account” banachuuf hordofuu qabnu keessatti waliin ilaalla. Kanaan alattis Faayidaawwan “google developer account” qabaachuudhaan argannu ni ilaalla. Namoonni hedduun gaafilee gara garaa dhimma kana irratti na gaafataa turan. Maxxansi kun deebii isaa ni ta’a yookin deebisa jedheen yaada. Hanga xumuratti qalbiin akka dubbistan isin affeeree jira. Ogeessi yookiin namni ogummaa aappota hojjachuu qabu kamuu…
Flutter akkamitti Android Studio irratti dabaluun danda’ama?
By Alifu Haji	Android, Flutter July 13, 2019
Flutter koompiitaroota akka Mac, Windows fi Linux irratti fayyadamuu dandeessu. Maxxansa kana keessatti akkamitti flutter koompiitara windows irratti dhimma itti bahuu dandeenyu waliin ilaalla. Flutter fayyadamuuf jalqaba gara marsariitii kanaa deemuudhaan flutter buufachuu qabdu. Faayilli zip tahe isinif bu’a. Faayila buufatte extract godhi. Qabee yookiin folder isa extract goote banuudhaan folder isa flutter jedhu copy gochuun, gara disk c deemuudhaan, paste godhi.…
VPN gaggaarii sadan moobayila Android
By Alifu Haji	Android, Technology July 3, 2019
Gargaarsa VPN(virtual Private Network)’n nageenya keenya kan gama intarneetii eegganna. Akkuma qunnamtiin gama interneetaa babal’ataa dhufeen, yakkoonni gara garaas wajjumaa babal’ataa dhufee jira. Kana ofirraa ittisuuf yookiin baraaruuf VPN gargaaramuun barbaachisaadha. Maxxansa kana keessatti, VPN gaggaarii moobaayiloota Android irratti hojjatan isin beeksisa. Haga xumuratti dubbisaa. Hiriyoota keessaniifis qoodaa.